July 19, 2008, 1:32 am Filed under: General AungSan ကျွန်တော်မမေ့နိုင်သော ဆယ့်ကိုးဇူလိုင်
`ပျောက်သောသူ ရှာလျှင်တွေ့သေသောသူ ကြာလျှင်မေ့´
ဘာကြောင့် ဤသို့ ဆိုရကြောင်းကိုလည်း ယခုဆက်လက်ဖော်ပြလတ္တံ့သော အကြောင်းအချက်များက အဖြေပေးနိုင်လိမ့်မည် ထင်ပါသည်။၁၉၄၇ခုနှစ် ဇူလိုင်လဆန်းတွင် `ဘီအိုဒီ´ခေါ် ဗြိတိသျှစစ်တပ် ပင်မ လက်နက်ခဲယမ်း သိုလှောင်ရေးတပ်မှ ဘရင်းဂန်း ၊ တော်မီဂန်း ၊ စတင်းဂန်းစသော မောင်းပြန်လက်နက်များနှင့်တကွ ခဲယမ်းကျည်ဆန် အမြောက်အမြားကို ပစ္စည်းထုတ် ပုံစံအတုများဖြင့် မသမာသူတစ်စုက ထုတ်ယူသွားကြောင်းကို Special Branch ခေါ် ရဲတပ်ဖွဲ့ဌာနချုပ်၏ `သတင်းတပ်ဖွဲ့´က သတင်းရသဖြင့် ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးမှတစ်ဆင့် အစိုးရအဖွဲ့ထံ သတင်းပို့ အစီရင်ခံခဲ့ပါသည်။
တက္ကသိုလ်နေ၀င်းစတိုင်သစ်မဂ္ဂဇင်း (ဇူလိုင်လ ၊ ၁၉၉၅ )
July 19, 2008 @ 2:54 pm Reply	Now, I know more about martyr’s day because of ur post. I heartly appriciate that but it can be only half as all our heart could only beat half instead of their’s normal tempo today and all our heads could only up in half way, too.
July 19, 2008 @ 5:41 pm Reply	ရှားပါး ဆောင်းပါးများ၊ ပြည်တွင်း၌ ဖတ်၇န် မလွယ် ကူသော ဆောင်းပါးများ ကိုရှာဖွေတင်ဆက် ပေးနေသောညီမလေး၏ စေတနာကို လေးစား ဂုဏ်ယူမိကြောင်းပါ။နောင်ကိုလည်းဆက်လက် တင်ဆက်နိုင်ပါစေ။
July 20, 2008 @ 6:45 am Reply	RSS feed for comments on this post.	TrackBack URI